हार्डर र स्टीनब्याक: सुईहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाउनको लागि नयाँ टेक्नोलोजी
हार्डर र स्टिनब्याकले भर्खरै जर्मनीको नर्डस्टेटमा उनीहरूको निर्माण सुविधाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ। यस वर्ष तीन प्रमुख नयाँ उच्च-टेक सीएनसी मेशिनहरूले उनीहरूको उत्पादन क्षमतामा ठूलो वृद्धि मात्र गरेका छैनन् तर उत्पादन डिजाइन, र विकासको लागि नयाँ अवसरहरू पनि खोलेका छन्।
एक नयाँ सीएनसी मिलिंग र टर्नि machine मेशिनले पहिले नै अत्याधुनिक मेशिनहरूको पूरक बनाउँदछ जुन हार्डवेयर र स्टीनब्याक एयरब्रस बनाइएको छ, जबकि नयाँ पालिishingग मेशिनले मेशिन गरिसकेपछि भागहरूमा लागू गर्न अझ राम्रो फिनिश सक्षम गर्दछ।
तर इकाई जसले हार्डर र स्टीनब्याक प्रयोगकर्ताहरूलाई सबैभन्दा ठूलो ब्याज प्रदान गर्दछ नयाँ CNC सुई मेसिन हो। यस मेशिनको क्षमताको अर्थ हो कि एच एंड एसले सुईहरूको आकार दिन र अन्त्य गर्न नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्छ। र यस नयाँ स्वतन्त्रताको साथ, उनीहरू कसरी अझ राम्रो हुने भनेर छानबिन गर्न थाले!
पहिलो गोल, सबैजना सुईबाट के चाहन्थे - बलियो बन्न! नयाँ उपकरणहरूले काम गर्न सक्दछ र अधिक विदेशी सामग्रीहरू आकार दिन सक्दछ, र त्यसैले नयाँ सुईहरू सामग्रीबाट निर्माण गरिन्छ जुन अघिल्लो भन्दा करीव १/3 कडा छ।
र त्यसपछि, डिजाइन ... धेरै "डबल-टेपर" सुईको हालसालै गरिएको छ। यो बिल्कुल सही छ कि डबल टेपर सुई एकल टेपर सुई भन्दा उत्कृष्ट छन्। जहाँसम्म, केवल एक डबल टेपर हुनु सफलताको ग्यारेन्टी छैन। H&S ले स the्केत गर्‍यो कि विन्दुमा र the्ग सुईबाट "स्वतन्त्र हुन्छ" नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो। विस्तृत कार्यको लागि, यो यही हो जहाँ दुई टेपर्स भेला हुन्छन्।
एच एन्ड एसले २०१ 2018 को टेपर लम्बाई, कोण र दुई ट्यापरहरू बीच कसरी सुई डिजाइन ट्रान्जिसनको माध्यमबाट एउटा अध्ययन गर्‍यो। धेरै प्रोटोटाइप पछि, र कलाकारहरूको साथ काम गर्न धेरै समय खर्च गरेपछि, एक नयाँ सुधार गरिएको स्पेसिफिकेशन ०.55 मीमी देखि ०..6 मिमीसम्म सबै आकारका लागि सिर्जना गरिएको छ।
H&S ले पछाडिको छेउमा सुई पहिचान चिह्नहरू सजिलै बुझ्नको लागि अवसर पनि लिए, किनकि तपाईं चित्रहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ। नोजलले पनि उही सरल विधि बोक्दछ।
नयाँ सुइहरूमा प्रतिक्रिया भनेको सबै चीज हो जुन H&S ले लक्षित गरिरहेको थियो - अधिक नियन्त्रणमा विस्तार, फाइनर लाइनहरू र उत्तम समग्र atomisation ट्रिगर दायरा मार्फत। तिनीहरू टिप-ड्राई पनि कम प्रवण छन् र कडा सामग्री र संशोधित डिजाइनको कारण, तिनीहरू अघिल्लो संस्करणहरू भन्दा धेरै मजबूत छन्।
कुनै सम्बन्धित पोस्ट छैन।
पोष्ट समय: Dec-24-2019